BBC Learning English - Course: English Expressions - Afaan Oromoo / Unit 1 / Session 14 / Activity 1
Jechoota Afaan Ingilizii guyyuu of ibsuuf nu fayyadu akkaataa itti fayyadamnu hubachuuf caqasi.
Wayitii marii qabxii 14
Listen to Herry and Feifei explaining the expression 'full-on'. As you listen, answer these questions:
Yooyyaa! Qophii jechoota Afaan Inglizii keessatti of ibsuuf si fayyadan 'English Expressions' akkasumas kan haaraa ta'an akka bartuu si gargaarrutti baga nagana dhufte. Har'a, Afaan Inglizii keessattii of ibsuuf kan si fayyadu 'full-on' jedhu ilaalla. Maal jechuudha jette yaadda? Hinbarree? Tole itti fufii caqasi. Feifei fi Harii'n waa'ee guyyoota boqonnaa isanii Sanbataa fi Dilbata wayita dubbatan caqasi; eenyutu irracaalaa yeroo bashannanaa qabaate jette yaada? Kan eenyuutu dadhabsiisaa ture? Hubachuudhaaf caqasi.
Hariin yeroo boqonnaa sagantaan hedduu fi dadhabsiisaa kan qabaate fakkaata. Wayita Feifeiin akkooshii waliin filmii daaw'achuun buhaartu, Hariin ammo Jimaataa mana dhugaatiitti 'bar' keessa ture, Sanbata halkan ammo gara mana dhugaatiifi sirbaa 'clubbing' deeme. What do you think FeiFei will think of Harry's night out?
Hariin Sanbataa fi Dilbata 'full-on' waan qabaate fakkaata. 'Full-on' jecha ibuuf nama gargaaru kan jechoota lama irra ijaarameedha 'guutuu' 'full' fi irra 'on'. Kunis haala irradarbaa fi walitti'aansuun godhamu ibsuuf itti fayyadamna. 'Full-on' haala faallaa (negative) ta'eenis itti fayyadamna. Keessattu wayita waanti tokko yookaan namni tokko waan irradarbaa ta'ee fi rakkoo uumuu malu godhu ittin ibsuufis ni fayyadamna. Feifeiin Saaraa wayita ibsitu 'full-on' jette - yoo namni tokko baay'ee sitti maxxanee dhaabbate ykn yoo ija sirra buqqifachuu dide, kan nama yaaddeessuufi aarsuudha yookaanis 'full-on'.
Egaa tarii yeroo ittaanutti Hariin guyyoota boqonnaa Sanbataa fi Dilbata 'full-on' hinta'in qabaachuun ni bashannana ta'a. Atihoo? Wantonni wayita 'full-on' ta'an sitti tolaa? Nama hanga tokko 'full-on' ta'e ni beektaa? Jechoiota Afaan Ingliziin of ibsuuf si fayyadan 'English Expression' dabalataaf yeroo ittaanutti walitti deebina.
Gaaleen kun mudannoowwaniifi muuxannoowwan hedduu waiin walitti hidhata.
Gaalichi mallattoo kana waliin gidduutti walqabachuu qaba.
Jechi kun waa’ee wanta biraa odeeffannoo dabalataa sitti hima
Have you ever had a weekend that was too full-on? Do you know anyone who is too full-on? Come and tell us on our Facebook group.
Barnoota English Expressions ittaanu kan dandeettii caqasuukee ittiin shaakaltuufi qooqa barbaachisoo barannutti walitti deebina.
haasawaa safuu inqabne (haasawa akka-feetee)
Jalqaba waan tokkoo irratti afeerra tasifamu (paartii eebba jalqabiinsaa/baniinsaa)
dhugaatiifi sirbaan halkaneeffachuu